De Gea + £175million = Ronaldo – Manchester Oo Dalab Qaali Ah Hor-dhigtay Real Madrid
HomeWararka MaantaDe Gea + £175million = Ronaldo – Manchester Oo Dalab Qaali Ah Hor-dhigtay Real Madrid
19/06/2017 Abdiwahab Ahmed
Manchester United ayaa dalab qaali ah u dirtay Real Madrid si ay ugu ogolaato saxeexa Cristiano Ronaldo oo doonaya inuu dib ugu laabto Manchester United, kaddib markii uu go’aan ku gaadhay inuu ka tago Real Madrid.
Manchester United ayaa usoo bandhigtay Real Madrid inay qaadato goolhaye David de Gea oo ay kooxda Spain in badan raadinaysay iyo lacag dhan £175million , isla markaana si si rasmi ah ugu wareejiso Ronaldo.
Kooxda Mourinho waxay doonaysaa in goolhayaheeda koowaad oo u hanqal-taagaya Madrid uu qayb ka noqdo heshiiska dib loogu soo celinayo Ronaldo, hase yeeshee, waxa la sugayaa in go’aankaas ay jawaab ka bixiyaan masuuliyiinta Real oo horeba ugu sheegay Ronaldo in aanay khasab ku haysan doonin, kaddib markii uu ka gadooday dacwad la xidhiidha lacago uu kala baxsaday waaxda cashuuraha Spain.
Ronaldo ayaa dalabyo ka helay kooxo ka dhisan waddanka China iyo PSG oo lacag badan haysata, hase yeeshee, sida ay khubrada ciyaaruhu sheegayaan Ronaldo waxa uu doonayaa inuu ku laabto Manchester United oo siddeed sannadood ka hor uu uga wareegay Real Madrid.
Xili ciyaareedkan waxa uu u dhaliyey Los Blancos 55 gool, waxaanu kula guuleystay horyaalka iyo Champions League halka waddankiisa Portugal uu u qaaday Euro 2016 badhtamaha sannadkii hore.
United waxa kale oo ay doonaysaa weeraryahanka Real Madrid ee Alvaro Morata, kaas oo wakhti horeba la sheegay inay heshiis shakhsi ah wada gaadheen, hase yeeshee lama hubo sida uu xaalku noqonayo haddii ay hesho Cristiano Ronaldo.
Sawirro: Xaaladda Caafimaad Ee Ciyaartooyo Ka Tirsan Badhan Oo La Dhaawacay
11/10/2015 Abdiwahab Ahmed
Habeenkii Khal-khalka Mourinho Iyo Barbar dhicii Kiev